Hery - Tsiky dia ampy | Mozika |
RadioVazoGasy amin'ny Android
2014-05-31 @ 21:24 in Izaho sy ny ahy, Mozika
Dieny mazotozoto dia navoaka indray koa ny RadioVazoGasy amin'ny Android. Ny player dia izay efa nataon'i SetraR ihany fa nahitsy kely fotsiny. Ny fandrindrana ny fandaharana hira kosa no namboarina tanteraka.
Ity App Radiovazogasy ity dia natao indrindra hihainoana ny RadioVazoGasy, handaharana hira handeha ao amin'ny RadioVazoGasy, ary hametrahana hafatra amin'ireo hira izay mandeha.
Mazava ho azy, mila internet izy vao mandeha.
Azonao alaina ao amin'ny: http://goo.gl/y5Ek7d
Na koa ao amin'ny Google Play : https://play.google.com/...?id=com.radiovazogasy.app (manomboka rahampitso)
2014-05-21 @ 09:07 in Mozika, Finoana sy Fivavahana
Vitsivitsy ihany ny hira vahiny mahazo avara-patana ato amin'ity blaogiko ity ka ity anakiray ity anisan'izany. Hira evanjelika, izany hoe tena fanaon'ny fiangonana evanjelika, kanefa hiraina matetika amin'ny fotoan-dehibe any amin'ny fiangonana katolika eto Italia ihany koa amin'ny teny italiana.
Fanafody kohaka: tantely, sakamalaho, atody manta, voasary makirana
2013-02-12 @ 18:40 in Mozika
Efa be mpahay fa tsy haiko fotsiny na amin'ny koha-maina na amin'ny koha-mando :-p no tokony hampiasana azy.
- Tantely iray sotro
- voasary makirana iray
- sakamalaho raper-na
- tamenak'atody manta iray
Toa tsy maninona koa na tsy asiana atody aza satria indraindray tsy dia azo antoka loatra hono ny atody.
Afangaro dia atao bain marie...
Toa mahomby ihany aloha hatramin'izao.
Fony i papa toa ahy
2012-12-31 @ 11:38 in Mozika
Anisan'ny tena nahalasa eritreritra ahy tamin'ity vanin'andro androany ity hoe tamin'i papanay nanana izao taonako izao dia inona avy no efa vitany taminay zanany?
Efa teraka daholo izahay 6 mianadahy. Ny faravavy efa 5 taona tamin'izany ary ny lahimatoa efa hifindra kilasy famaranana. Mbola erotrerony tamin'ny asa izy.
Efa betsaka koa ny fandraisana anjara nataonay teo anivon'ny fiaraha-monina... izay namolavolany anay. Ny chorale, ny skoty, ny fikambanana teny am-piangonana, ny lomano, ny judo, ets.
Nahavita zavatra goavana sahady izy, indrindra ho an'ny zanany, efa azo lazaina mihitsy hoe nahalehibe satria kely sisa aho tamin'izany dia afaka bacc.
Dia mieritreritra ny mba vitako amin'izay aho vao tonga saina hoe nahavita be ny ray amandreny taloha. Zaza iray ara ny anay no velomina, mbola tsy firy taona akory dia efa miha fotsy ny volo ary miha sola ny loha. Marina fa sarotra ny fiainana, nefa na izany aza.
Koa natokako indray ity andro androany ity hisaorana ireo ray aman-dreniko tamin'ny zavatra efa vitany sy mbola ataony amin'izao fotoana izao. Misaotra fa nahavita ny adidinareo ianareo... dia tsofy rano tsara izahay mba hahavita mihoatra izay vitanareo ihany koa amin'ny taranaka amam-para.
Ny tany karakaina omeo orana (video)
2011-07-11 @ 00:22 in Mozika
Androany teto Roma no faran'izay nafana indrindra, misy alerte rouge amin'ny toerana sasany eto afovoany atsimon'i Italia. Antampon'ny hafanana tsara izany amin'izao fotoana izao... dia ny tsaroana dia ireo olona any Toliara izay miaina izany hafanana izany mandavan-taona. Andro vitsivitsy monja ao anatin'ny taona no mba misy orana. Ary ny orana sendra milatsaka dia eken'izy ireo va avy amin'-Ndragnahare. Marina fa misy ny fomba maromaro ataon'izy ireo hangatahana orana kanefa tsy mbola naheno mihitsy aho, hoe ny orana dia andriamanitra (toa ny an'ny Grika sy ny kolotsaina hafa). Andriamanitra ihany no mpanome orana, ka raha tsy ampy na tsy misy orana dia any amin'Andriamanitra izy ireo no manao fombafomba.
Ny tsikaritra dia indraindray ny Kristianina indray no tsy mahasahy mivavaka mangataka orana, menatra angamba na tsy mino. Ka ity hira iray misy hoe "Ny tany karakaina omeo orana, ny foko mitaraina fa te hahita anao". (Andraso kely raha mbola tsy miseho)
Ry Fanahy nomena anay (Video)
2011-06-20 @ 03:33 in Mozika
Ny teny hoe "Pentecôte" dia avy amin'ny grika hoe πεντÎ®κοντα izay midika hoe faha dimampolo. Ny Pantekoty dia andro faha 50 aorian'ny Paka. Fety nodimbiasana avy amin'ny fety jiosy antsoina hoe Chavouot na hoe fetin'ny herinandro, izay nankalazaina ihany koa 50 andro taorian'ny Pessah (Paka jody). Araka ny fitantaran'ny Asan'ny Apostoly Toko 2 dia nandritra ny andron'ny Pantekoty no nidina tamin'ny mpianatra ny Fanahy Masina ka nampivaha ny lelan'izy ireo ho afaka niteny ny fiteny azon'ny rehetra. Nisy fotoana tokoa nanjary tsy nifankahazo fiteny intsony ny olona satria saika hiakatra ho any amin'Andriamanitra ka namorona ny tilikambon'i Babela, fa tamin'ity kosa dia Andriamanitra Fanahy no nidina ka nampifankahazo teny azy ireo indray. (tohiny)
Video: Fantatrao ry Reny
2011-06-05 @ 07:12 in Mozika
Tamin'ny telo herinandro lasa no nanombohako ity hira ity dia omaly vao vita... kanefa mitovy ihany ny vokany. Samy ratsiratsy ihany. Tsy mitombona ihany izany ilay eritreritro tato hoe rehefa vitaina ao anaty roa andro ilay hira dia tandrametaka... fa tena ilay fahaizana mihitsy no tsy ao :-).
Nandresy ny Tompontsika
2011-04-24 @ 22:58 in Mozika
Niezaka namoaka ity hira iray tsy dia mora loatra ity aho androany. Nandresy ny Tompontsika. Hatramin'izay dia ohatry ny maivana be foana ny fetin'ny Paka rehefa tsy mihira ity hira ity. Hany ka na dia amin'ny toerana tsy miteny malagasy aza dia manezakezana rehefa any antrano. Tamin'ity taona ity izany dia niavaka mihitsy ilay hira satria efa hatry ny omaly alina no nibahana sy niverimberina tao an-dohako tao. Ny mahagaga kely fotsiny dia tsy misy teny hoe Aleloia mihitsy ao anatin'ity hira ity.
Video: Tsy ny ahiahy
2010-10-25 @ 04:32 in Mozika
Tamin'ity indray mitoraka ity vao hitako ny fanovana ny positions (x,y,z) tsirairay ao amin'ilay Cinelerra rehefa. Natao anjoanjo fotsiny mantsy izy tamin'ny taloha. Fa na izany aza dia mbola hita ihany fa tsy tena precis ilay nanaovako azy. Nisy olana ohatra ny soratra mihetsika satria indraindra dia diso ny toerana nanapaingorana ny keyframe voalohany.
Mbola tsy ao tsara koa ilay mask fa indraindra miseho tampoka. Tsy nojereko intsony koa moa talohan'ny namaranana azy kay nisy tsy nety.
Zavatra saika natao ihany koa ny pseudo camera-motion. Izany hoe ny camera fixe tsy mihetsika fa ny sary no ahetsika dia mba tahaka ny hoe misy olona maka ilay sary. Mba hampety azy anefa dia mila marge lehibebe kokoa hahafahana manakisaka ny sary. Hatsaraina amin'ny manaraka fa tsy hita tsara.
Farany ny hira tamin'ity dia tsy nampiasana afatsy piano. Mazava ho azy fa teo no tena nahitana hoe mbola tsy lasa lavitra ny fahaizana satria tsy nanampy intsony ny teknolojia-n'ny Cubase. Ohatry ny niadana loatra koa ilay izy, angamba amin'izay mba haihay kokoa.
Ihafio ao e.
(NB. Ny soratra tonga dia nataoko fa mbola ela be vao tafiditra ao amin'ny Youtube ilay izy. Rahampitso maraina vao ho hita ny sary.)
Video: O ry Jesoa...
2010-10-11 @ 00:36 in Mozika
Taratara androany vao nivoaka ny video satria mbola nandehandeha nandritra ny weekend. Variana any Tivoli any tokoa amin'izao.
Ny hira amin'ity weekend ity dia tsy misy mozika. Hira anakiray mahafinaritra ahy izay mamehy ny fitsipi-piainana evanjelika telo dia ny fahantrana, fahadiovana ary ny fanekena. Io dia tsy voady telo natao ho an'ny relijiozy katolika irery fa natao ho an'ny olona rehetra. Miaina ny fahantrana arak'ilay hoe "Sambatra izay mahantra am-panahy", miaina ny fahadiovana araka ilay hoe "Sambatra izay madio fo", ary miaina ny fanekena arak'ilay hoe "Tsy hotompoina fa hanompo".
Video: Reny mpitari-dalana
2010-10-03 @ 22:55 in Izaho sy ny ahy, Mozika
Hira fihiranay sy i Papanay ity rehefa ilay "mikandra" iny izahay. Olona tena manam-pinoana i papa ary mino fa misy ny fahagagana. Izahay moa tsy misy azo atao afatsy ny migoka ny vokatry ny fivavahany. Mba mivavaka ihany izahay fa ny azy dia mahavariana mihitsy fa imbetsaka no tanteraka izay zavatra angatahany. Betsaka no tena tadidiko fa ny anakiray izay dia tena niteny mihitsy izy taorian'ny "neuvaine" izay nataonay hoe "Miandry ny valiny sisa isika"... dia tsy ampy herinandro taorian'izay dia nisy zavatra tsy noeritreretina nitranga tokoa. Rehefa mbola tsy ny tena no miaina azy dia sarotra inoana :-)
Ny hira dia ao amin'ny Fihirana Katolika, Hasina pejy 84. (tohiny)
Video: Sarotra be
2010-09-27 @ 07:19 in Mozika
Tsy hoe titre-na hira akory ilay sarotra be :-). Hitako mbola misy olana be amin'ilay fampiasana ny effets amin'ilay manamboatra video. Miankina amin'ny fitaovana rahateo moa ilay izy. Isaky ny manao preview dia tafakatra 100% ny fampiasana ny cpu amin'ilay ordinatera. Sarotra be, noho izany, ny mampifanandrify tsara ny feo sy ny sary. Ny fond nampiasaina koa dia rindrina fa tsy tabilao maitso ka dia noezahina nesorina aza ilay fond dia tsy tafa... Teo koa moa ny tsy fitandremana ka tsy hitako akory hoe tsy nisy effets ilay beso farany :-) (tohiny)
Video: Mahaiza misaotra [UPDATED]
2010-09-19 @ 22:25 in Mozika
[Ratsy be ny feo dia namboarina]
Toa ny mametraka video indray no vitako matetika kokoa noho ny manoratra lahatsoratra ho an'ny blaogy... tsy rariny. Niezaka aho mantsy hanao hira iray isan-kerinandro dia toa vita ihany aloha hatramin'izao.
Raha liana dia misorata anarana ao amin'ny canal-ko ao amin'ny youtube http://www.youtube.com/heriniaina
Ity ary hira anakiray izay ahatsiarovako an'ilay boay kely mpitendry tao am-piangonana izay. Efa tsy boay kely intsony izy aloha amin'izao fa tena nampihaiky ahy ny fitendriny. Taminy no nahenoako an'io intro io fa ny improv teny antenantenany indray feeling sendra niakatra. (tohiny)
Video: Ianao ilay nirahina
2010-09-13 @ 04:30 in Mozika
Hira iray indray, mbola hiram-pivavahana ihany. Ianao ilay nirahina hanasitrana ny fo mivalo. Mbola ny fitaovana rehetra teo aloha ihany no nanaovana azy. Ny sary dia sary tahiry mampiseho ny sombin-dàlana Antananarivo - Arivonimamo.